भूमीहीन तथा साना किसानका लागि कानुन मौन किन ? « Lokpath
भूमीहीन तथा साना किसानका लागि कानुन मौन किन ?
काठमाडौं । भूमी सम्बन्धी विभिन्न नियम, कानुन र नीति बनेपनि भूमीहिन तथा साना किसानको समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था संविधानमा पनि गरेको छ, त्यसका साथै विभिन्न नीति तथा ऐनहरु बनेका छन् तर समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।
ंविश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘भूमिहिन र साना किसानको खाद्य अधिकार’ विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा भाग लिएका अधिकांश सरोकावाल निकायका प्रतिनिधिहरुले ऐन, कानुन, नीतिहरु कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले हालै विघटन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको बारेमा पनि उनीहरुले गनुासो गरेका छन् ।
भूमी र कृषिलाई अलग अलग राखेर काम भइरहेको हुनाले भूमहिन र साना किसानको समस्या समाधान गर्नमा ढिलाई हेको बुझाई देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकारले नीति भूमी र कृषिको नीति अलग अलग बनाएको कारण यसको समस्या समाधान नभएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । भूमी र कृषि, कृषि र सिँचाई, कृषि र वनलगायताका विषयलाई एकठाउँमै राखेर नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव रीता बास्ताकोटीले भूमीहिन र साना किसानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको दावी गरे ।
भूमीहिन र साना किसानले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधाबाट उनीहरु बन्चित रहेको गुनासो उनको थियो । त्यस्तै, कृषक भवानी सुवेदीले संविधान बनाइन्छ, कानुन बनाइन्छ तर व्यवहारमा नआएको गुनासो गरिन् । उनले पनि कृषि र भूमीलाई एक ठाउँमा राखेर नीति बनाए भने भूमीका धेरै हदसम्मको समस्या समाधान हुने बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७८,भाद्र,२९,मंगलवार १५:२६